Iyo mascots emahara software. Chinyorwa chidiki | Linux Vakapindwa muropa
In the Nyaya yapfuura Akange ataura kuti Tux haaziye wekutanga mhuka-akafemerwa mascot mune yemahara software yenyika. Rukudzo irworwo runoenda kumusoro wemusango weprojekti yeGNU.
1 Iyo mascots emahara software. Mhara iyo yakatanga zvese
Iyo mascots emahara software. Mhara iyo yakatanga zvese
Mune ino kesi hapana chaiyo kana inofungidzirwa nyaya. zvinongova nezve kufanana kwefoni pakati pezita remhuka uye chirevo cheprojekti.
Wildebeest izita rakakurumbira rerudzi rwe antelope nepo GNU iri chirevo chinodzokororwa cheGNU isiri Unix.
Musoro weWildebeest unomiririra huchenjeri, hunyanzvi hwekutaurirana uye simba Ndeapi maitiro eprojekti
Pa peji yepamutemo logo inotsanangurwa se:
Musoro wakanaka weNew neyakajairika ndebvu nenyanga dzakamonyoroka dzinopa mweya wakanaka. Anoratidzika kunge ari kunyemwerera kugutsikana nebasa raitwa kusvika parizvino. Asi, anochengeta maziso ake akatarisa kure.
Iyo yekutanga 1996 vhezheni yakanga iine mbiri yekugadzirisa
Zvandinoda kubva kuchinyorwa chakapfuura kuti Tux ndiyo inonyanya kuzivikanwa mascot mune yakavhurwa sosi ingangove inhema. Sezvo Firefox inonyanya kufarirwa. kunyangwe izvozvi zvisisashandiswe sepakutanga, uyeRukudzo irworwo runogona kuenda kupanda uyo anozviona segava.
Pakutanga chirongwa chebrowser chaizobudirira Netscape yainzi Phoenix. Iri rinoita sezita rakakurumbira kwazvo munyika yehunyanzvi sezvo Apache Foundation iine chirongwa chezita rimwechete uye panguva iyo bhurawuza yaifanirwa kushandura zita rayo kuti irege kuvhiringidzwa nesoftware iripo.
Inoenderana nezita rekutanga, logo yaive shiri ichibuda mumoto.
Imwe nzira yekutanga iyo vateereri vakatamba nayo yaive Firebird (firebird), izvi zvakavatendera kuti varambe vachishandisa chipfuwo chekutanga, shiri yakatsvuka yakashongedzwa ine huso hushamwari hwaiita kunge hunobuda mumoto.
Chekupedzisira, pakusarudza zita reFirefox vakasarudza kushandisa mhuka yaive nezita iro muChirungu. Icho chikara chinodya icho parizvino chiri kurarama (panjodzi yekutsakatika muHimalaya, kumaodzanyemba kweChina, India neBhutan.
Pfungwa yePoenix (Fénix) sezita reprojekiti yakatorwa neinjini yedhatabhesi inotsigirwa neApache Foundation. Chipfuwo chako ishiri mune mbiri ine muswe unopfuta.
Ini ndinobvuma kuti kusanganisira Python mune iyi enum inomanikidzwa sezvo nyoka dziri mu logo dzisingatombo tsanangurike sekatuni. Guido Van Rossum, musiki wemutauro, akafarira veBritish comedy boka Monty Python ndosaka akabhabhatidza iro rine zita iro. Chinhu che nyoka ndechekuti python is python muChirungu.
Mashawi inyoka dzisina huturu iyo inouraya nyama yavo nekumanikidza.
Semashoko anobatsira, inogona kuwedzerwa kuti iyo Python Software Foundation inokurudzira kuiswa kweiyo logo mune chero chirongwa chinoshandisa mutauro uyu wechirongwa.
Ini handizive kana nzou ingadai yakave sarudzo yangu yekutanga kune server-padivi script mutauro unoshandiswa muwebhu dhizaini. Izvo hazvinyatso kuratidza kumhanya kana kureruka, Asi zvinoita sekunge handisi ndoga ndisingakwanise kuramba puns. elePHPant, kwete chete ichiri nesu, zvakare ine mutsetse wayo wezvinyoro nyoro uye, sekunyeverwa pane yepamutemo webhusaiti yeprojekiti, kune zvakare fakes.
Pidgin chirongwa chehurukuro chinokutendera iwe kuti upinde mumaakaundi pane akawanda chat network panguva imwe chete. Chiratidzo chavo njiva yepepuru. Kunyangwe ini ndisingakwanise kuwana tsananguro, ndinofunga inoreva hangaiwa dzekumhanya.
Panguva ino mukuumbwa zvinova pachena kuti. Kunze kwemusoro wedondo, mhuka dzakasarudzirwa marogo eprojekiti hadziedze kuburitsa chero chinhu. Ivo vakasarudzwa zvichibva pazita.
Izvi pasina mubvunzo iri kesi neMoby Dock, katuni whale yakatakura midziyo yekutengesa kumusana kwayo. Yaive sarudzo yakasarudzwa kune ino nhasi inonyanya kufarirwa machira manejimendi manejimendi.
Ehezve urwu runyorwa haruna kukwana, iyo SUSE Linux Gecko isipo, iyo MySQL dolphin uye mushure mezvizhinji zvayo panenge pasisina kushayikwa kwemukana wekutaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo mascots emahara software. Chinyorwa chidiki
Pidgin inobva kunjiva kuChirungu zvinoreva njiva uye dzinodudzwa zvakafanana.